Dr. Tint Swe's Writings: Neck Lumps လည်ပင်း အလုံးအကျိတ်
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ။ ကျွန်မတခြားအမျိုးသမီးအတွက်မေးပေးတာပါရှင့်။ အမျိုးသမီးရဲ့အသက်က25 နှစ် ပေါင်ချိနိ 100 ရာသီသွေးမှန်ပါတယ် အိမ်ထောင်မရှိပါ။ လည်ပင်း ဂုတ်ပိုးနေရာမှာ အကျိတ် ဖြစ်နေတာ2လလောက်ရှိပါပြီ။ ဆေးခန်း သွားပြချင်လို့ ဟော်မုန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာသွားရမလား။ လည်ချောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာသွားရမလားရှင့်။ အကျိတ်ရဲ့ အမျိုးအစားကိုလည်းသိချင်လို့ အကျိတ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလေး ပြောပြပေးပါနော်ဆရာ။ ကင်ဆာအကျိတ်လား၊ အဆီအကျိတ်လား ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့နည်းလေးပါ ပြောပြပေးပါရှင့်။ စာနည်းနည်းမှားသွားလို့ ပြင်ခွင့်ပြုပါနော် အကျိတ်က လည်ပင်းနဲ့ နားရွက်အောက်နားကြားနေရာလေးပါဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် (၂၅) နှစ်ပါ။ လည်ပင်းရှေ့ဘက်အလယ်နားမှာ အဆီကျိတ်လိုမျိုးလေး ရွေ့နေပြီး ဘယ်လက်နဲ့စမ်းမှ သေချာစမ်းလို့ရပါတယ်။ အာသီးနည်းနည်းရောင်နေပါတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သိချင်လို့ပါ။ ဆရာဝန်ကတော့ ရက်ချိန်းစောင့်နေလို့ ပြန်မပြရသေးပါဘူး။ သွေးစစ်ချက်အဖြေပါ။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင့်။ ကျွန်မအသက်က ၂ဝ ပါ။ လည်ပင်းမှာအကျိတ်ဖြစ်တာပါ။ ခုဆို ၁ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ စဖြစ်တုန်းက ဘာမှမဖြစ်လို့ ဒီတိုင်းထားပြီ ၅လလောက်ကြာတော့ ပြည်တည်အနာလိုဖြစ်လာလို့ ဆေးရုံတတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံကခွဲပေးမယ်ပြောပြီး ၁ဝ ရက်လောက်ထိ ဘာမှမလုပ်ပေးလို့ ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လည်ပင်းအဖုကပေါက်ပြီး ပြည်တွေထွက်လာပါတယ်။ ဒီတိုင်းကောင်းသွားပြီထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိ အနာလို့ပုံစံ ဖြစ်နေပြီ။ နာပြီးကိုက်နေပါတယ်။ ဘာဆတ်လုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၄။ ကျွန်တော့အမျိုးသမီးက အသက် ၃၂ ရှိပါပြီ။ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ၁ လက်မခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ လှုပ်လို့ရပါတယ်။ မနာပါဘူး။ နီတာမြန်းတာလည်းမရှိပါဘူး။ ဘယ်ဖက် နားထင် အောက်နားမှာပါ။ စိုးရိမ်နေမိတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိလို့ပါ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ မေးမိတာပါ။ ဖြေပေးပါ။
လည်ပင်းကြီးလို့ သံသယရှိသူ ဟော်မုန်းစစ်ရမယ်။ သွေးစစ်တာဖြစ်တယ်။ ဟော်မုန်း နည်း-များသိရင် ဆေးလိုမယ်။ လိုအပ်သူ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်မယ်။ ဘိုင်အော့်ပစီ ခေါ် အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတာထက် မှန်တာ မရှိပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်အဖြေတွေထက် မှန်တယ်။
ဒီစာမှာ လည်ပင်းကြီးနဲ့မဆိုင်တာကိုသာ ရေးပါမယ်။ လည်ပင်းမှာဖြစ်တဲ့အကျိတ်က အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ငယ်သူနဲ့ ရွယ်သူတွေမှာ အဖြစ်များကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေ စာရင်းချပါမယ်။ စာရင်းဖတ်ပြီး စိုးရိမ်စိတ် လိုတာထက် မပိုစေလိုပါ။ မမြင်ရ မစမ်းရသူတွေကို ရောဂအကြောင်းရေးရတာ ဖတ်ရသူတွေအတွက် အားနာရတယ်။ မေးတဲ့သူများ စာရင်းရှည်ကြီးထဲက တမျိုးသာဖြစ်မယ်။ သူဖတ်ရတာက အများကြီး။ ဆောရီး။
2. Allergic reactions (အလာဂျီ) တခုခုနဲ့ မတည့်တာ၊
3. Bacterial pharyngitis လည်ချောင်းနာ၊
4. Cancer of the thyroid သိုင်းရွိုက်-ကင်ဆာ၊
5. Carotid aneurysm (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြော ဖေါင်းခြင်း၊
6. Cat scratch disease ကြောင်ကုတ်ရောဂါ၊
7. Congenital cervical rib မွေးရာပါ လည်ပင်းနံရိုး၊
8. Congenital sternomastoid tumor မွေးရာပါ ကြွက်သား အကျိတ်၊
9. Focal myositis of the sternomastoid ကြွက်သားရောင်ရောဂါ၊
10. Glandular fever အကျိတ်ရောင် အဖျား၊
11. Goiter လည်ပင်းကြီး၊
12. Graves' disease လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်းများရောဂါ၊
13. Herpes infections ရေယုံ၊
14. HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)
15. Hodgkin's disease လည်ပင်းအကျိတ်-ကင်ဆာ၊
16. Leukemia လူကီးမီးယား သွေးအားနည်းရောဂါ၊
17. Lipoma အဆီကျိတ်၊
18. Lymphoma တက်စေ့ ကင်ဆာ၊
19. Mouth cancer ခံတွင်းကင်ဆာ၊
20. Mumps ပသိရောင်ရောဂါ၊
21. Rubella (German measles) ဂျာမန် ဝက်သက်ရောဂါ၊
22. Salivary gland tumor တံတွေးထွက် အကျိတ်အလုံး၊
23. Sebaceous cyst အရေပြား ချွေးထွက်အိတ် အကျိတ်၊
24. Spontaneous apical lung herniation အဆုပ်ထိပိုင်း အထက်ကျွံခြင်း၊
25. Stone in salivary duct တံတွေးထွက်ပြွန် ကျောက်၊
26. Strep throat လည်ချောင်းနာ၊
27. Submandibular tumor မေးရိုးအောက် အလုံး၊
28. Swollen Lymph Nodes တက်စေ့ရောင်၊
29. Thyroglossal cyst မွေးရာပါ လည်ပင်းကြီး အကျိတ်-အိတ်၊
30. Thyroid cancer လည်ပင်းကြီးကင်ဆာ၊
31. Thyroid nodule လည်ပင်းကြီးကင်ဆာမဟုတ် အကျိတ်၊
32. Tonsillitis အာသီးရောင်၊
33. Tuberculosis တီဘီအကျိတ်၊
အများအားဖြင့် ကင်ဆာမဟုတ်အကျိတ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာနဲ့ နာတာရှည် ပိုးဝင်တာတွေကနေ ဆက်ဖြစ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရက်သတ္တ ၃ ပါတ်ထက် စောတာတွေဟာ သူ့အလိုလို သက်သာ ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာ ဖြစ်မယ်။ ၄ ပါတ်မှ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ အလုံး-အကျိတ်-အနာ မှန်သမျှ စမ်းသပ်တဲ့အခါ မျက်စိနဲ့ စရပြီး၊ လက်နဲ့ အသေအခြော စမ်းရပါတယ်။ နေရာ၊ အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အပျော့-အမာ၊ အပူ-အအေး၊ ရွေ့ရ-မရ၊ နာ-မနာ ဆိုတာတွေ သိအောင်လုပ်ရပါတယ်။ လည်ပင်းကြီး-အကျိတ်ဆိုရင် မျိုးချခိုင်းတော့ အထက်-အောက် ရွေ့လိမ့်မယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် အာသီးရောင်ဘူတာမေးပါ။ မျက်နှာ-လည်ပင်း အနာဖြစ်ဘူးသလား။
အလုံးဟာ အရေပြားနဲ့ တဆက်ထဲ၊ အရေပြားထဲမှာဆိုရင် Sebaceous cyst ချွေးထွက်အိတ်-အကျိတ် နဲ့ Lipoma အဆီ-အကျိတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အလုံးက အလယ်တည့်တည့်လောက်မှာ ပါးစပ်က မျိုတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် လျှာထုတ်လို့ အလုံးက ရွေ့လာရင် မွေးရာပါ လည်ပင်ကြီးအိတ်နဲ့ လျှာဆက်နေတဲ့ပြွန် Thyroglossal duct ဖြစ်နိုင်တယ်။ အထဲမှာ အရည်ရှိမယ်။ ပိုးမဝင်ရင် အနာဘူး။
Lymph nodes တက်စေ့ရောင်တာ အတော်များများဖြစ်ကြတယ်။ နဲနဲနာမယ်၊ မာတင်းတင်း ရာဘာလိုနေမယ်၊ ကိုင်ပြီး ရွေ့ရင် ရချင်ရမယ်၊ မရတာလဲရှိမယ်။ တက်စေ့ တွေ့ရင် ပါးစပ်၊ တံတွေးထွက်အိတ်တွေ ဆက်စစ်ပါ။ ကင်ဆာ၊ အနာ ရှာပါ။
Dermoid cyst ဆိုတာ အရေပြားမှာ အိတ်လေးနဲ့အကျိတ်၊ ခွဲရင် အထဲမှာ အမွှေးလို၊ ချွေးလိုပါနေတာတွေ့မယ်။
မေးရိုးအောက်နား အကျိတ်တွေက လူကြီးဆိုရင် မာပြီး၊ မနာရင် ကင်ဆာ၊ လူငယ်-ကလေးတွေဆိုရင် တီဘီ၊ (အင်ဖက်ရှင်)၊ Salivary calculus တံတွေးထွက်လမ်း-ကျောက် စတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုချခိုင်းလို့ မရွေ့တာက Salivary gland swelling တံတွေးထွက်အိတ်၊ Branchial cyst မွေးရာပါ (ဘရန်ခီရယ်) အိတ်၊ Cystic hygroma မွေးရာပါ (ဆစ်စတစ်-ဟိုက်ဂရိုးမား) အလုံး၊ Carotid aneurysm (ကရောတစ်) သွေးလွှတ်ကြော ဖေါင်းတာ၊ Carotid body tumour (ကရောတစ်) အကျိတ်၊ Sternomastoid tumour (စတာနို-မတ်စရွိုက်) ကြွက်သားအလုံး (မွေးတုံးက ထိခိုက်မိတာ)၊ Laryngocoele လေပြွန်အိတ် (လေမှုတ်ရင် ပိုဖေါင်းတာမယ်)၊
အကျိတ်တခုမက တွေ့တာဆိုရင် TB တီဘီ၊ Glandular fever အကျိတ်ရောင်အဖျား၊ HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ)၊ Lymphoma (လင်ဖိုးမား-တက်စေ့ကင်ဆာ) Metastases တနေရာမှာ ကင်ဆာဖြစ်လို့ ပြန့်လာတာ တခုခု စဉ်းစားပါ။ တခြားနေရာက တက်စေ့တွေလည်း စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ ချိုင်း၊ ဘေလုံး၊ အသည်း။
Cervical rib မွေးရာပါ လည်ပင်းနံရိုး၊ Subclavian artery aneurysm လည်ပင်း (ဆပ်ဖ်ကလေးဗီးယမ်း) သွေးလွှတ်ကြော ဖေါင်းတာ၊ Pharyngeal pouch မွေးရာပါ (ဖရင်ဂျီရယ်-ပေါက်ခ်ျ)၊
ဖြစ်နိုင်တာတွေထဲက တခုချင်း ဖယ်ထုတ်နည်းနဲ့ စကာတင်းရွေးရမယ်။ လိုသေးတဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ရလိမ့်မယ်။ တခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေလည်း ကြည့်ရမယ်။ အလေးချိန်ကျလာ၊ ညချွေး ထွက်တာ၊ ကိုယ်ပူတာ၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ သွေးစစ်၊ သလိပ်စစ်၊ အသာစထုတ်စစ်။ လည်ပင်းအကျိတ်ကို ပြည်တည်တာကလွဲရင် မခွဲရတာများပါတယ်။ ရုတ်တရက် သက်သာသွားတာမျိုးဟာ အကျိတ်အိတ်ထဲမှာ အရည်ရှိခဲ့ရာကနေ ခမ်းသွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆုပ်တီဘီကြောင့် ဒီမှာလာဖြစ်တာ ဟုတ်နိုင်သလို တခြားဟာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်။ Biopsy အသားစထုတ်စစ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီအကျိတ်ဟာ ဘာလို့ အတိအကျ ပြောမရပါ။
1. Cysts and Lipoma ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံးအကျိတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/cysts.html
2. Lymphoma (လင်ဖိုးမား) ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/lymphoma.html
3. Neck Glands လည်ပင်း အကျိတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/neck-glands.html